Xukuumadda oo ka dalbatay dhinacyadda ku dagaalamaya Kismaayo inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka
Muqdisho, 29, June, 2013….Waxaa saaka shir Jar’id ku qabtay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Afhayeenka Xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli, isagoona ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo.
“Waxaa ay Dawladdu aad uga xuntahay in dad badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan dagaaladda kismaayo kasoo cusboonaaday oo ah kuwo marar badan ay ka digtay Dawladda isla markaana aan loo baahnayn xiligan muhiimka ah, taariikhiga ah ee dalku uu kasoo kabanayo burburkii iyo dagaaladii gaaray 22-kii sano. Ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay dagaaladdan, kuwii ku dhaawacmayna allaha caafiyo” ayuu yiri Afhayeenka Xukuumaddu.
• Dowladu waxay ku baaqaysaa in dhinacyada ku dagaalamaya magaaladda Kismaayo ay u hogaan samaan baaqii IGAD oo ahaa in shir weyne lagu qabto magaalada Muqdisho si dib-u-heshiisiin dhab ah loo dhex dhigo dadka ku nool gobolada Jubooyinka.
• Dhinacyadda dagaalamaya waxaa ay dawladdu ka dalbanaysaa in ay deg-deg ku joojiyaan dagaalka, waana in ay maanka ku hayaan in aan loo dulqaada karin in dhiiga shacabka la daadiyo si micno la’aan ah, lana barakiciyo.
• Dawladdu waxay ka dalbanaysaa in Wixii khilaafaad ah ee jira lagu xaliyo hanaan siyaasadeed oo wada hadal ku qotama.
• Qoriga waan soo aragnay in aan madaxtinimo lagu gaarayn, cidkasta oo hub iyo dagaalo damacsan in ay xukun ku gaarto waxay ku danbayn doonaan bur bur iyo ceeb.
Afhayeenku wuxuu sidoo kale sheegay in Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Somalia Mudane Cabdi Faarax Saacid Shirdoon uu aaminsan yahay, horayna ugu cel-celiyay in badan in xalku uu ku jiro wada hadal iyo in la dhagaysto dawladda Soomaaliya, waana in gogosha-nabadeed ee dawladdu ay ku howlantahay laga dhex-raadiyaa xalka Gobolka.
Ugu danbayntii Xukuumadda waxay ugu baaqaysaa dhinacyada dagaalamaya inay ixtiraamaan war-murtiyeedkii ka soo baxay UN iyo IGAD oo ku baaqayey in laga fogaado gacan ka hadalka iyo dirirta.
Warbaahinta Xafiiska R'iisal Wasaaraha
Muqdisho, 29 Juun 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta markale ku baaqay in si deg-deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Kismaayo.
Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow), Senior Advisor & Spokesperson to the Office of the President, engabdirahman@gmail.com +252 615 479911 or +252 699 998854
Faafin: SomaliTalk.com | June 30, 2013